Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda gobolka Hiiraan | All idamaale News
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda gobolka Hiiraan
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Sheekh Cismaan Axmed Barre ayaa baaq nabadeed u direy beelaha ku dagaalamaya qeybo ka mid ah gobolka Hiiraan isagoo ugu baaqay in dagaalka lagu bedelo wadahadal.
Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in xilligan oo dadka miyiga ku nool ay ka soo kabanayaan abaarihii aan loo baahnayn in ay dagaalamaan oo ay dhiigooda qubaan iyadoo lagu jiro barkaysan ee Ramadaan.
Baaqan ayuu jeediyay guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle kadib markii kulan ay wada yeesheen Madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdulaah Cosoble iyo guddoomiye ku xigeenka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen iyo labada gudoomiye ku xigeen ee baarlamaanka Hirshabeelle.
Deegaanka Baanyaaley oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa maalmihi la soo dhaafay waxa ka socday dagaal u dhexeeyo maleeshiyo beeleed iyadoo dagaaladaana ay ku dhinteen dad gaaraya 30 ruux oo ah maleeshiyaadkii dagaalamayay halka uu dhaawacu kor u dhaafay konton kale.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Shiikh Cismaan Barre ayaa ku soo celceliyay dhowr jeer intii uu baaqan dirayay inuu ku hadlayo afka baarlamaanka Hirshabeelle. Arrintan ayaa u muuqata in la xaliyay khilaafkii ka dhex jirey xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ee dhowaan sababay in qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka ay sheegeen in ay shaqo joojin ku sameeyeen guddoomiyaha baarlamaanka kana gudbiyeen mooshin xilka qaadis ah.